Kutsva kutsva kuEcommerce neDHL Parcel | ECommerce nhau
Kutsva kutsva kuEcommerce neDHL Parcel
Zvemagetsi zvekutengeserana zvakamira pachezvayo mumakore apfuura seimwe yeiyo nzira dzekutenga zvimwe kushandiswa nevashandisi veInternet. ECommerce inotarisirwa kupedzisira yave main yekutengesa chiteshi, zvakanyanya kana zvakakosha kudarika kutengeserana yezvitoro zvepanyama mukurwira kwayo kuchengetedza yakakosha musika mugoo pamberi pekusamisirika kufambira mberi kwe100% emabhizinesi epamhepo.
Kunyangwe e-commerce yanga ichikura gore rimwe nerimwe muSpain, ichokwadi kuti nanhasi haisati yasvika kumatanho edzimwe nyika senge United Kingdom, uko kune huwandu hwekushanda pamusoro pezana remamirioni ezviuru. Izvi zvisati zvaitika kukurumidza kukura kwe e-commerce, online zvitoro zvinofanirwa kukwidziridza yavo masisitimu ekudzivirira kugadziriswa mune mimwe mwaka yegore.
Naizvozvo, kupa zvinobudirira mukutumirwa kwezvigadzirwa uye kuva nevadyidzani vanokwanisa kusvika kumutengi munharaunda nepasi rese, chimwe chinhu chinova chakakosha chaizvo kumakambani. online zvitoro.
Saka zvinodikanwa kubvisa mhando dzese dzezvipingaidzo zvinoita kuti zvikone kuendesa zvigadzirwa zvirinani. Kunatsiridza mune izvi kunotendera kuderedza huwandu hwezviitiko uye zviwanikwa, iyo pasuru uye e-commerce makambani anofanirwa kuisa mari.
DHL Parcel sevhisi uye hunyanzvi
Ndokusaka DHL Chikamu nyika muSpain nepfungwa iyi: wedzera sarudzo dzekuendesa kuti dzive dzakarurama, yakasununguka kumutengi uye pasina yechipiri kuyedza. Kuti uwane izvi, iyo femu yeGerman inonyanya kuzvipira kune mazano maviri.
Yokutanga, wedzera sarudzo dzine mutengi parizvino kuti ugamuchire zvaunotenga online, kuti ugone kushandura zuva rekutakura, sarudza mumwe mugashiri kuti agamuchire chako (muvakidzani kana concierge) kana sarudza iyo DHL yekuunganidza nzvimbo (ServicePoint)
Iyi yekupedzisira sarudzo, iyo nzvimbo dzebasa, inomiririra mbiru yechipiri pakamisikidzwa zano rekambani kumhanyisa kuendesa, nekuti inokurudzira kuunganidzwa kwemirairo munzvimbo yakamisikidzwa uye iri padyo. Izvo zvinobvumidza kudzikamisa nekukurumidza nzira dzekuendesa.
Nekuda kwechikonzero ichi, DHL Parcel inosvika muPeninsula ine network ye Mapoinzi mazana maviri nemazana manomwe pakati peSpain nePortugal, uye zvimwe zve 54 000 muEurope yose, iyo inobvumidza iwe kuti upe vatengi vako e-commerce yekuzadza maodha avo muEurope sekunge vari vekumba.
Naizvozvo, uye mushure mebudiriro yakawanikwa neiyi modhi yekutakura muEurope yose, uye kunyanya kuGerman (uko chikamu chakakura nekukomberedza 47% mugore rapfuura), zvinoita sekunge e-commerce ichangotanga ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Kutsva kutsva kuEcommerce neDHL Parcel
Anoshamisa Ecommerce Sites Ekufemera Kwako
Kutengesa zvemagetsi muSpain